Ndị ọka iwu International Energy na Netherlands - Law & More
Na ụkpụrụ, iwu ike dị mkpa mgbe azụrụ, nye ma ọ bụ mepụta ike. Ndị na - enye ike ọrụ yana ụlọ ọrụ na ndị mmadụ n'otu n'otu na - ekere òkè na nke a. Law & MoreNdị ọkàiwu na-elegide anya na mmepe niile na iwu ike, gụnyere mmepe ọhụụ n'ọhịa nke ọgbọ nke ike na-adigide.
OOK na-achọ onye ọka iwu?
> Iwu ikike ọhụrụ
> Iwu na ngalaba nke ike ọkọnọ
> Isszụ ahịa ahịa na azụmaahịa ahịa
Ndi okacha mara nwere uzo di uku, ebe ha na elekwasiri anya na uzo ike. Yabụ, mmanụ, eke, ọkụ eletrik, biomass na ikuku na ike anyanwụ. N'ihi usoro a sara mbara, ndị ahịa anyị bụ ndị na-eweta ngwaahịa na ndị na-emepụta yana ndị ahịa, ndị na-etinye ego na ndị na-eweta ihe na ọrụ. N'ikpeazụ, anyị na-arụkwa ọrụ maka iji nweta ihe oriri na saịtị ndị ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-ekpuchi ngwaahịa ndị dị ka uzuoku na mmiri mebiri emebi. Yabụ, ịchọrọ ọkachamara n’ihe gbasara iwu ike? Law & More na - enye gị ọrụ ndị a site na Eindhoven na Amsterdam:
• Mbepụta nkwekọrịta ikpo ọkụ na ume;
• advice nye ndụmọdụ maka izu na ire nke ike;
• advicenye ndụmọdụ gbasara nnabata na ike ume yana nkwekọrịta ike;
• Inye ndụmọdụ gbasara ịbịpụta amụma ike;
• plansdepụta atụmatụ arụmọrụ ike;
• itinye akwụkwọ maka ikike na ikepụ;
• Inye ndụmọdụ na azụmaahịa ahịa na azụmaahịa akwụkwọ.
Iwu ikike ọhụrụ
Iwu ike na-arụ ọrụ dị mkpa na ọha mmadụ nke oge a, dịka anyị enweghị ike ime ọzọ na-enweghị ọkụ eletrik, ọkụ na ikpo ọkụ. Otutu ike a ka na enweta site na mmanu ndi n’enweghi mmanu dika mmanu n’agha na mmanu ndi ozo, ma mmanu ndi a n’ajo ojoo na gburugburu, na mgbakwunye, ha n’abia. Iji hụ na anyị anaghị agwụ ike ma mee ka gburugburu anyị dịkwuo mma, ugbu a, anyị ga-eji ụzọ ọzọ ume dị ka mmiri, ikuku, anwụ anwụ na biogas. Ihe ndị a na - enye ike bụ ọdịnihu, maka na ha anaghị emerụ gburugburu ebe obibi yana ha anaghị enwe oke.
Ma Dutch na European iwu metụtara iwu gburugburu. Ka anyị kọọrọ gị ma nye gị ndụmọdụ
Iji hụ na a na-agbaso usoro ihe ga-egosipụta ọdịnihu na amụma ihu igwe, Netherlands ekpebiela nkwekọrịta ike maka uto na-adịgide adịgide. Ebumnuche nke nkwekọrịta a bụ ime ka Netherlands gbasie ike na-adịgide adịgide site na 2050. Nkwekọrịta Ike nwere ebumnuche dị iche iche maka ụlọ ọrụ chọrọ ha ịchekwa ike. Na mgbakwunye, gọọmentị Dutch abanyela na nkwekọrịta ogologo oge ya na oke nke ngalaba iji nyochaa mmelite arụmọrụ ike. Companieslọ ọrụ ndị so na nkwekọrịta ndị a ga-enwe ọtụtụ uru: ha ga-erite uru site na ịchekwa ego, mmegharị usoro ọtụtụ na onyonyo na-adigide. Mana enwerekwa ọtụtụ ọrụ metụtara na nkwekọrịta afọ ole a. Nkwekọrịta ndị a dị mgbagwoju anya ma na-achịkwa ọtụtụ iwu. Usoro ọhụrụ ahụ emetụtakwara ụlọ ọrụ gị? Nkwado iwu dị mma dị mkpa, ka ị wee mara ebe ị kwụ. Biko kpọtụrụ Law & More anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka.
Iwu na ngalaba nke ike ọkọnọ
Have ga-emerịrị gbasara ịzụta ma ọ bụ ọrịre nke ike? Mgbe ahụ ị mara na ị nwere ike ịzụta ọkụ eletrik ma nzụ ahịa na site na mgbanwe ngwaahịa. Ebe o bu na usoro ihe omuma kariri nke abuo ndi mmadu nwere ike imebi emebi, nkwado iwu di nkpa. Ọ dịkwa mkpa na e mere nkwekọrịta doro anya ka ndị ọzọ wee mezuo ọrụ ya ma onye ahụ na-ebubata ya ọ bụla agaghị enweta mfu ọ bụla. Law & More na-enye nkwado na mmemme ndị a ka ị ghara iche ihe ịtụnanya ọ bụla.
N'ọtụtụ oge, ọkọnọ eletrik na gas na-ewere ọnọdụ site na netwọkụ eletrik ma ọ bụ gas. Ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-enye ndị ahịa ndị ọzọ ike dị mkpa ka ha họpụta onye na-ahụ maka netwọrụ. Agbanyeghị, enwere ihe dị iche na iwu a: ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, iji usoro nkesa nkesa mechiri emechi ma ọ bụ akara akara, ọrụ ịhọpụta onye na-ahụ maka netwọọkụ anaghị etisa. Sistemụ nkesa mechiri emechi bụ netwọma azụmaahịa nwere oke ókè na enwere naanị ọnụ ọgụgụ ndị ahịa. Ndi nwe sistemu ekesa nwere ike itinye akwụkwọ maka izipụ onye ọrụ netwok. Ahịrị dị adị mgbe eriri eletrik ma ọ bụ ọkpọkọ na - ejikọ onye na - emepụta ike ozugbo onye ọrụ ike. Usoro akara aka abụghị nke netwọọk, yabụ na ịnweghị ọrụ ịhọpụta onye na-ahụ maka netwọrụ na nke a.
Ọ bụrụ n’ị bụ akụkụ nke ihe ndị na-eweta ike, ọ dị mkpa ka ị kpebie ma è nwere sistemụ kpuchiri ekpuchi ma ọ bụ otu ahịrị. Nke a bụ n'ihi na ikike na ọrụ dị iche iche na-ekere òkè na ụdị nnweta abụọ a. Ka osi di, enwere uzo ndi ozo ekwesiri iburu n'uche. Iji maa atụ, ndị na - eweta ike nwere ike ịchọ ikikere iji nye ndị na - azụ obere gas na ọkụ eletrik. Na mgbakwunye, ndị na-eweta ike ga-eburu n'uche usoro iwu nke Okpomoku, nke na-emetụta njedebe nke nkwekọrịta ikpo ọkụ.
You nwere ajụjụ ma ọ bụ ejighi n'aka maka iwu ike maka ndị na - eweta ike? Mgbe ahụ kpọọ ndị ọkachamara nke Law & More. Anyị na-enye ụlọ ọrụ na ndị ahịa ihe gbasara gas na ọkụ eletrik na-akwado nkwado iwu. Ma ị na-achọ akwụkwọ ikike, ịbịpụta nkwekọrịta ike ma ọ bụ na-ekere òkè n'ahịa ahia ike, ndị ọkachamara anyị nọ ọrụ gị.
Isszụ ahịa ahịa na azụmaahịa ahịa
Dị ka ụlọ ọrụ, ị ga-emerịrị ahịa anwansị ma ọ bụ azụmaahịa asambodo? Ga-agbakọ ego ole CO2 ị na-enweta kwa afọ, ka ị wee nweta ego kwesiri ekwesi. Ọ bụrụ na ọ bụ ikpe ka ị na-etinyekwu ego, maka ịzụta ngwaahịa gị abawanyela, ị ga-achọ ikike ikike mgbapụ ọzọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ọtụtụ eletrik dị ukwuu, ị nwere ike itinye aka na azụmaahịa akwụkwọ. N'okwu abụọ ahụ, Law & MoreNdị ọka iwu ga-abịara gị aka. Ndi okacha mara anyi na elekwasiri anya na ahia umu anwuru na ahia asambodo ma mara otu esi enyere gi aka ma oburu na enwe nsogbu. Yabụ, ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ikike mbupụtaghị ikike? Want chọrọ itinye akwụkwọ maka ikike mgbapu? Ma obu ichoro ndumodu banyere ahia umu anwuru ma obu ahia akwukwo? Biko kpọtụrụ ndị ọka iwu na Law & More.